အသားမည်းလို့အနိုင်ကျင့်ခံရသူအဖြစ်ကနေ အဝတ်အထည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ (၁၁) အရွယ်ပတ္တမြားခဲလေး ရော်ဂျာစ် - YOYARLAY Digital Media and News
ခရစ် ရော်ဂျာစ် (Kheris Rogers) ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက မည်းလွန်းတဲ့ အသားအရေကြောင့် တက်နေတဲ့ကျောင်းမှာ အမြဲတမ်း အနိုင်ကျင့်ခံနေရတာကို ဘယ်လိုမှ မေ့လို့မရပါဘူး။
တစ်နေ့ ကိုယ်တိုင်ဆွဲရမယ့် ပန်းချီသင်ခန်းစာတစ်ခု သင်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဆရာမက အသားမည်းလို့ ရှက်နေရတဲ့သူ(မ)ကို အမဲရောင် ရောင်စုံခဲတံပေးခဲ့ပြီး တခြားကျောင်းသားတွေကိုတော့ အညိုရောင် ရောင်စုံခံတံပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အသက် (၁၁) အရွယ်ကောင်မလေးက သူ(မ)ရဲ့အတန်းဖော်တွေကို “အားလုံးက အမေရိကန်-အာဖရိကန် ကပြားတွေဆိုပေမဲ့ အကုန်လုံးထဲမှာတော့ ငါက အမည်းဆုံးပေါ့” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရော်ဂျာစ်ဟာ ဒီလိုမျိုး မရပ်တန့်နိုင်တဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး ကျောင်းပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ သူ(မ)ရဲ့အသားအရေက ဖျက်မရတဲ့တံဆိပ်လိုမျိုး သူ(မ)နောက် အမြဲလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ရော်ဂျာစ်က သူ(မ)နဲ့ တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခု (သို့) အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီ။ အဝတ်အထည်”ဘရန်း”နာမည်ကတော့ “Flexin’ in My Complexion” လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဒီဘရန်းက အနုပညာရှင်တွေကြားထဲမှာ တော်တော်လေး ဂယက်ထနေခဲ့ပါပြီ။
တကယ်တော့ “Flex in your complexion” ဆိုတာက ရော်ဂျာစ့်အဖွားရဲ့ အကြံပေးစကားပါ။
ငယ်ရွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ သူ(မ)ကို အားတက်စေနိုင်တဲ့စကားတွေ ကြားရဖို့ရာ အဖွားဖြစ်သူဆီ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ “Flex in your complexion” “ကိုယ့်အသားအရေပေါ် ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ရှိပါ” ဆိုတဲ့အကြံပြုစကားက မိမိ အသားအရေကြောင့် အရှက်ရနေတဲ့ သူ(မ)ကို အဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာပဲ လှပလာတယ်လို့ ခံစားရစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီစကားစုက မိသားစုတွင်း အသုံးအနှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါ ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။
ရော်ဂျာစ့်အစ်မ တေလာ ပေါလ်လာထ့် (Taylor Pollard) ဆိုသူက #FlexinInHerComplexion ဆိုတဲ့စကားစုကို မိသားစုဓာတ်ပုံအချို့နဲ့အတူ ဟတ်ရှ်တက် (hashtag) ခံ တွစ် (tweet) လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တုံ့ပြန်မှုတွေ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တွစ်တာအသုံးပြုသူတွေက ရော်ဂျာစ်ရဲ့ အသားအရေနဲ့ဆံပင်ဟာ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိပြီး လှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ဖြစ်ကြောင်း ချီးမွမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ တော်တော်များများက သူ(မ)လိုပဲ ငယ်ငယ်တုန်းက အသားအရေကြောင့် အနိုင်ကျင့်ခံ၊ စနောက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရော်ဂျာစ်တစ်ယောက် comment တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ “OMG, ဒါကလူတွေငါ့ကို တကယ်မြင်နေတဲ့ အစစ်အမှန်ပုံစံပဲ” ဆိုပြီးတော့တောင် ဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့ အစ်မဖြစ်သူ ပေါလ်လာထ့်က CNN ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲကနေစလို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာ “Flexin’ In My Complexion” ဆိုတဲ့စာလုံးကို တီရှပ်မှာ ရိုက်ပြီး အင်္ကျီထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဧပြီလ (၂၀၁၇) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးဟာ ယခုဆိုရင် ရှပ်အင်္ကျီပေါင်း (၁၀,၀၀၀) ကျော် ရောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာငွေပေါင်း (၁၀၀,၀၀၀) ကျော်ထိ ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
တီရှပ်စတင်ရောင်းချပြီး မကြာမီရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ရက်ပ်ပါ Snoop Dogg က ရော်ဂျာစ်အကြောင်းကို အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ “အသားမည်းတာကြောင့် သူ(မ)လို အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ယုံကြည်ချက်ရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အသက် (၁၀) နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးက အဝတ်အထည် “ဘရန်း” တစ်ခု စတင်ခဲ့ပါတယ်” ဆိုပြီး ရက်ပ်ပါကြီးက ရေးသားထားပါတယ်။
နောက် (၂) လကြာတဲ့အခါမှာတော့ သရုပ်ဆောင်၊ ပရိုဂျူဆာနဲ့ စာရေးဆရာမ လီနာ ဝစ်သ် (Lena Waithe) ဆိုသူက စတိတ်စင်ပေါ် အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတုန်း “Flexin’ In My Complexion” ရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ သူ(မ)ပုံကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုတော် အယ်လ်လီရှာ ကီးစ် (Alicia Keys) ကလည်း ဈေးကွက်ကနေ ရှပ်အင်္ကျီဝယ်ထားကြောင်း ရော်ဂျာစ့်ဆီ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ ပေါလ်လာထ့်ကဆိုပါတယ်။
(၂၀၁၇) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာတော့ မင်းသမီး Lupita Nyong’o ကလည်း “Flexin’ In My Complexion” ရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ သူ(မ)ရဲ့ပုံကို အင်စတာဂရမ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။ “ငါနင့်ကို မြင်နေရတယ်။ ငါနင့်ကို ခံစားလို့ရတယ်။ ငါအမြဲအားပေးနေမယ် @kherispoppin! ပြီးတော့ ဒီရှပ်အင်္ကျီလေးကိုလည်း ချစ်တယ်” လို့ရေးသားပြီး တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရော်ဂျာစ်ဟာ နယူးယောခ့်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Harlem Fashion Week ကို ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး Steve Harvey ရှိုးကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ရော်ဂျာစ်ဟာ Nike ရဲ့ ကြော်ငြာ မော်ဒယ်လ်အနေနဲ့ပါ ငှားရမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ “အသားအရေကြောင့် အနိုင်ကျင့်ခံရရင်း Nike ရဲ့ ကြော်ငြာ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လာရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တဲ့ကံလဲလို့” ဆိုပြီး (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတုန်းက ရော်ဂျာစ်က အင်စတာဂရမ်မှာ ပိုစ့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေအများကြီးရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိတဲ့အတွက်လည်း သူ(မ)ကိုယ် သူ(မ) အံ့ဩနေခဲ့ပါတယ်။
“ဒီလိုအဝတ်အထည်ဘရန်းတစ်ခု စတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ပါဘူး” လို့ရော်ဂျာစ်က ဆိုပါတယ်။ “ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အဲလောက်ထိ လူသိများသွားလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပါဘူး။ ဒီတိုင်း တွစ်လေးတစ်ခု တင်လိုက်တာပါပဲ။” လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်မရဲ့ “ဘရန်း”ကို လူတွေအများကြီး ခုလိုဝယ်နေတာက တကယ့်ကို အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်”
ယခုလက်တလောမှာတော့ “Flexin’ In My Complexion” ရှပ်တွေက အွန်လိုင်းကနေပဲ ဝယ်ယူလို့ရပါသေးတယ်။ ကုမ္ပရဲ့နောက်ခြေလှမ်းကတော့ စတိုးဆိုင်တွေကို တင်ပို့နိုင်ဖို့ပါ။ ရော်ဂျာစ်ကလည်း နောက်ပိုင်း သူ(မ)ရဲ့ စီးပွားရေးကို ချဲ့ထွင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စတိုးဆိုင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အထိပါ မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ ရော်ဂျာစ်လေးက လူတိုင်းလူတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိပြီး ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ကြဖို့ကိုသာ သူ(မ)ဘက်က မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“တခြားကလေးတွေကို ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ကိုယ့်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – မော်ဒယ်လ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားပါ။ မင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မူတည်ပြီး မင်းလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး သူတို့မှာပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး” လို့ရော်ဂျာစ်လေးက ဆိုပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ အရမ်းတွေးတတ်တဲ့ကလေးလေးပဲနော်။
Ref : CNN “This 11 year old was bullied for her skin color. Now, she ownsasuccessful clothing line”
Previous Previous post: ဒုံးကျည်ပစ်စင် အစိတ်အပိုင်းတွေကို စတင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား
Next Next post: Moon (လ) ဟာလည်းပဲ ငလျင်လှုပ်နိုင်ကြောင်း
Published: November 17, 20215:46 pm Updated: November 19, 202110:23 am
အဆိုးရွားဆုံး စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ကြုံတွေ့နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ နိုင်ငံသမိုင်းတစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကနေ ဇွန်လအတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကနေ (အရင် ၃ လပတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်) ၇.၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပြီး နှစ်စဉ်နှုန်းထားရဲ့…
Published: August 17, 20205:19 pm